पुरुषहरु कस्तो ठाउँमा बोल्न डराउँछन् होला त ? जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
पुरुषहरु कस्तो ठाउँमा बोल्न डराउँछन् होला त ?
पुरुषहरु महिलाको दाँजोमा केही कन्फिडेन्ट हुने गर्दछन् । नयाँ ठाउँमा बोल्दा पनि विश्वस्त बोल्न सक्ने पुरुषहरु कस्तो ठाउँमा बोल्न डराउँछन् होला त ?
हालै एक अध्ययनले बताए अनुसार सुन्दर महिलाको सामु पर्ने बित्तिकै पुरुषहरु नर्भस अनुभव गर्न थाल्छन् । अनुसन्धानबाट निस्केको यो तथ्य अनुसार अधिकांश पुरुषहरु सुन्दर महिला सामु जाने बित्तिकै आफुलाई अप्ठ्यारो महसुस गर्ने गर्दछन् ।
नेदरल्याण्डका एक अनुसन्धानकर्ताका अनुसार धेरै जसो पुरुषहरु सुन्दर महिलाहरुको सामु गए पछी सुन्दरता सामु आफु लाई अप्ठ्यारो महसुस गर्ने गर्दछन् । यो कुरा पुरुषहरुको प्रोफेसनल जिवनमा पनी देखा पर्ने गरेको तथ्य अनुशन्धान बाट पत्ता लागेको छ ।
यदी अफिसमा कुनै सुन्दर महिला भए आफ्नो काममा भन्दा बढी ति महिला सँग जिस्कनमा समय दिने गर्दछन् र त्यो बेला कुनै जरुरी काम छ भन्ने समेत हेक्का राख्दैनन् । तर, यो कुराले महिलाहरुमा भने त्यती फरक पार्दैन । उनीहरु आकर्षक पुरुष सँग पनी त्यतिकै सहजता पूर्वक आफुलाई उपस्थित गराउन सक्दछन् ।
महिलाहरुलाई पुरुषको सुन्दरताले भन्दा पनि उसको व्यत्तित्व, बोल्ने शैली र आवाजले बढी आकर्षण गर्ने र पुरुषहरु महिलामा आकर्षित हुन सुन्दरता मात्र हेर्ने पनि एक अध्ययनले देखाएको थियो । पुरुषहरु सुन्दर महिला तर्फ छिटै आकर्षित हुने गरेकाले यसो भएको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताले बताएका छन् ।